Apple ရဲ့စီအီးအို Tim Cook ကရိတ် 198 အတွက် $ 2016 သန်း, ကစစ်မှန်တဲ့ Is | ယင်း
7 ဇန်နဝါရီ 2017
Apple ရဲ့စီအီးအို Tim Cook ကရိတ် 198 အတွက် $ 2016 သန်း, ကစစ်မှန်တဲ့ Is
အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဖြစ်သူ Tim Cook ကမိမိအစံချိန် 2011 ဂုဏ်အသရေထဲကနေသေးသည်သူ၏အကြီးမြတ်ဆုံးပေးချေမှုခဲ့စဉ်က Apple ရဲ့ထိပ်တန်းအရာရှိများလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကသူတို့ရဲ့လစာကျဆုံးခြင်းကိုမြင်တော်မူ၏။
သောကြာနေ့ကမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ကြားခံကွှေးကျွောခွငျးဖွငျ့ဖျောပွထားအဖြစ်ကွတ်ရဲ့ငါးထိပ်တန်းလက်ထောက်, 22.8 ဘို့အကြောင်းကို $ US31 သန်း ($ 2016 သန်း) တစ်ဦးချင်းစီရတယ်။ အဆိုပါလျော်ကြေးငွေအထုပ်လစာနှင့်ငွေဆုလာဘ်အတွက် $ US2.8 သန်းနှင့်တန်ဖိုးကိုထောက်ပံ့ငွေအတွက် $ US20 သန်းပါဝင်သည်။
Warren Buffett ကရဲ့ Berkshire Hathaway က Apple ကိုကျော်တစ်ဘီလီယံထားကိုထုတ်လေ၏။
တစ်ဦး $ US8.75 သန်းလျော်ကြေးများနှင့် $ US12 သန်းပိုက်ဆံဆုလာဘ်အပါအဝင်ဘဏ္ဍာရေး 2016 အဘို့အကွတ်ရဲ့ $ US3 သန်း ($ 5.37 သန်း) အဝတ်မခြုံဘဲလုပ်ခ, သူ Apple ရဲ့ CEO ဖြစ်သူသို့လှည့်များ၏အပြီးတွင်တယ်ကြီးမားသောဂုဏ်အသရေထဲကနေပါး 1.26 သန်းရှယ်ယာကိုယ်စားပြုပါဘူး ။
သူတို့အပ်နှင်းသည့်အခါသူတို့ကအကြောင်းကို $ US136 သန်း ($ 186 သန်း) တန်ဖိုးရှိခဲ့ကြသည် - ကွတ်ဂုဏ်အသရေကနေတိုက်ပိတ်နှစ်တွင်ဆည်းပူးထားပြီးအကြီးမြတ်ဆုံးအစီးအနင်း။ ဒါကြောင့်ကိုယ့်တန်ဖိုးအသစ်ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးမှတ်တမ်းတင်ကတည်းကရှယ်ယာများ၏ခန့်မှန်းချက်ကြားခံ Documents ရဲ့ rundown လုပ်ခ table ထဲမှာဖယ်ထုတ်ထားသည်။
စီအီးအိုလျော်ကြေးများနှင့်ဆုလာဘ်အတွက် $ US2015 သန်း, သူ၏ 10 တိုးထောက်ပံ့ကြေးအနေဖြင့်စတော့ရှယ်ယာအတွက် $ US64.2 သန်းတယ်သောအခါအကျိုးကျေးဇူး 2011 နေအလွန်ကြီးမားသောတုံဖြစ်ပါတယ်။ ဘဏ္ဍာရေး 2016 များအတွက်ရှယ်ယာ သာ. တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း Apple က၎င်း၏ပထမဆုံးနှစ်စဉ်အပေးအယူ 2001 ကတည်းကလျော့အစီရင်ခံပင်အဖြစ်လက်လွှတ်၏အန္တရာယ်မှာကွပ်မျက်ဖို့နဲ့, ဤလိုင်းများတလျှောက်မဟုတ်ပြုပြင်တာတွေမခံခဲ့ရပါ။
မော်ဒယ်များကို ပြု. ရှေ့တော်၌ထို iPhone ရဲ့နှောင်းပိုင်းတွင်ပုံစံများကို Apple ရဲ့အကြီးမြတ်ဆုံးဝင်ငွေမီးစက်, ပရိုဂရမ်အလုံးစုံစစ်ဆေးပြုပြင်ဖို့လမ်းကို enlivened ကြပြီမဟုတ်။ created လူမျိုးနှစ်မြှုပ်ခြင်းအမှတ်ရရှိနေကြသည်စဉ်တရုတ်နိုင်ငံတွင်ပြိုင်ဘက်လျော့နည်းစျေးကြီးပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။
အဆိုပါဘုတ်အဖွဲ့ကွတ် 1 သူ 10 အတွက်ကယ်လီဖိုးနီးယားအခြေစိုက်အဖွဲ့အစည်းကထိန်းချုပ်ယူဆသည့်အခါ 2011 နှစ်အတွင်းနှစ်ခုဖြည့်စွက်အတွက်အင်္ကျီဟုသတ်မှတ်သန်းချုပ်ထားရှယ်ယာဝန်ခံ။
2013 မှာလုပ်ခ panel ကကွတ်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အထူးသဖြင့်ဝယ်လိုအားမှာ S & P 33 သာရှိပြီးပြည်ပမှအဖွဲ့အစည်းရဲ့ဆွေမျိုးစတော့ရှယ်ယာသေဒဏ်စီရင်ရန်အရှယ်ယာ 500% ချည်ထားနှင့်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းထွက်ပေးဆောင်ဖို့ရှယ်ယာစီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်နှစ်ပြီးနောက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု 7-for-1 စတော့ရှယ်ယာအုပ်စုခွဲလုပ်လေ၏။
Apple ရဲ့စီအီးအို Tim Cook ကအိုင်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူ၎င်း၏ပထမဆုံးနှစ်စဉ်အပေးအယူအစီရင်ခံဆိုတဲ့အချက်ကိုရှိနေသော်လည်းလွန်ခဲ့သည့်တစ်နှစ် $ 200 သန်းအနီးလုပ် ...
Apple ရဲ့စီအီးအို Tim Cook ကအိုင်ဖုန်းဖန်တီးသူ 200 ကတည်းက၎င်း၏ပထမဆုံးနှစ်စဉ်အပေးအယူယိုယွင်းအစီရင်ခံဆိုတဲ့အချက်ကိုရှိနေသော်လည်းလွန်ခဲ့သည့်တစ်နှစ် $ 2001 သန်းအနီးဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဓာတ်ပုံ: ဒါဝိဒ်သည်ပေါလုကိုမောရစ်
Cook ကသြဂုတ်လ 280,000 အဆိုပါစာရင်းထဲတွင်အဖွဲ့အစည်းများအကြားထိပ်တတိယ၌ရှိ၏ပြီးဆုံးသည့်သုံးနှစ်ကကျော် Apple ရဲ့စတော့ရှယ်ယာပြန်လာကတည်းက 2016 အဘို့သိုထားသည့် 24 ကွပ်မျက်ချိတ်ဆက်ရှယ်ယာအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှတဦးတည်းတယ်။ သူဒါ့အပြင်အလုပ်မှာတည်းခိုသူ့ကိုမှပြုပြင်တာတွေ 980,000 ရှယ်ယာတယ်။
သူက CEO ဖြစ်တယ်ကတည်းကအတိတ်ဆုကြေးငွေနှင့်အတူစုစည်း, ကွတ်ထက်ပို $ US350 သန်း ($ 479 သန်း) တန်ဖိုးရှိစတော့ရှယ်ယာကိုစုဝေးစေခဲ့သည်။
သူကဆွေမျိုးစတော့ရှယ်ယာပြန်လာတွဲရှယ်ယာ၏တစ်ဝက်ရဖို့လမ်းကြောင်းအပေါ်ဒါ့အပြင်ရဲ့ဘလွန်းဘာ့ဂ်တို့ကစုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်နှုန်းအဖြစ်, သုံးနှစ်ရှယ်ယာရှင်ပြန်၏အလင်း၌သြဂုတ်လ 2017 နှင့် 2018 ထွက်ဆပ်ဖို့ကြိုတင်ဘွတ်ကင်။
အမြတ်အစွန်းအပါအဝင်အိုင်ဖုန်း-ထုတ်လုပ်သူရဲ့ 2016 အချိန်ဇယားကိုတစ်နှစ်စတော့ရှယ်ယာပြန်လာ S & P 12 အဖွဲ့အစည်းများ၏ထက်ဝက်ရိုက်နှက်သောတစ်ပြားများအတွက် 500 ပဲရှိတယ်။
အကြီးတန်း VPS Angela Ahrendts, Eddy Cue, Lucas Maestri ဒန် Riccio နှင့်ဘရုစ် Sewell များအတွက် Value ကိုထောက်ပံ့ငွေဒါ့အပြင်ရာမလုံလောက်မှုထက်ပိုသုံးနှစ်ကြာ Apple ရဲ့ဆွေမျိုးစတော့ရှယ်ယာပြန်လာတွဲနေကြသည်။ သူတို့ခွင့်ပြုပါတယ်ပြီးနောက်လေး-and တစ်နှစ်ခွဲအတွင်းပိုင်းအင်္ကျီ၏ကျန်။ အဖွဲ့အစည်းအသားတင်အပေးအယူများနှင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်လုပ်အားခရည်ရွယ်ချက်များလွဲချော်အဖြစ်ငွေကိုဆုလာဘ်အာရုံစိုက်အောက်မှာထွက်ပေးဆောင်။
Apple ရဲ့လုပ်ခဗျာဒိတ်တော်များအနေဖြင့်ကျောင်းပြေးအချို့သောအဖွဲ့အစည်းရဲ့မရှိမဖြစ်အလိုအပ်ဆုံးကိုယ်စားလှယ်ဖြင့်သမုတ်သော, ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဒီဇိုင်းအရာရှိချုပ် Jony Ive ဖြစ်ပါတယ်။ Ive ကတော့ iMac, iPod နဲ့ iPhone အပါအဝင် Apple ရဲ့အကျော်ကြားဆုံးပစ္စည်းများကိုတစ်ဦးစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာတွေအများကြီးဖော်ပြထား။
အဘယ်ကြောင့် Tableau? အကောင်းဆုံးမှာ Data visualization ဆော့ဖျဝဲ